HOGAAMIYAYAASHA ASXAABTA OO BILAABAY BAAQYO KHALKHAL GALIN AH AFHAYEENKA M/TOOYADA | Toggaherer's Weblog
WAFTI UU HOGAAMINAYO M/WEYNE RAYAALE OO SAAKA U AMBABAXAY WADANKA INGIRIIKSKA
HOGAAMIYAYAASHA ASXAABTA OO BILAABAY BAAQYO KHALKHAL GALIN AH AFHAYEENKA M/TOOYADA
Hogaamiyayaasha Asxaabta Mucaaridka ah oo bilaabay sidii caadada u ahayd in ay ummada reer Somaliland u jeediyaan Baaqyo khal-khalin iyo amaan darro ku abuuraya dalka.
Tan iyo shalay waxa warbaahinta gudaha iyo dibadaba hogaamiyayaasha Asxaabta Mucaaridku ay ka jeedinayeen hadalo amaan darro iyo cabsi ku abuuraya ummada reer Somaliland, kuwaasi oo mar kasta caadaystay marka doorashadu soo dhawaato in ay olole doorasho ka dhigtaan in aan dalka sharci iyo kala danbayni aanay jirin.
Waxa haddaba aanu leenahay nimankaasi hogaamiyayaasha Asxaabta Mucaaridka ah in aanay indhaha ka qarsan shuruucda iyo dastuurka dalka Jamhuriyada Somaliland uu leeyahay ee ummaduna hore ugu codaysay.
Nin kasta oo damac siyaasadeed leh una hamuumaya in uu helo kursiga ummada laga hogaamiyo , waa in uu ku dhaqmaa dastuurka iyo xeerarka ummada , kaasi oo si cad ugu qeexan tahay in Madaxweynaha talada haya uu bedeli karo oo kaliya Madaxweyne la soo doortay sida ku cad qodobka 83-aad ee dastuurka farqadiisa 3-aad.
Ma jirto meel ay dastuurka kaga qoran tahay in labada gole Qaran ay isu yimaadaan oo ay ka arrinsadaan, si ay u sameeyaan xukuumad ku meel gaadh, sida ay ku doodayaan Hogaamiyayaasha Asxaabta Mucaaridka qaar ka mid ah.
Sharciga dalka u yaalaa waxa uu si cad mar walba u tilmaamayaa in Komishanka Doorashooyinku ay iyagu awood u leeyihiin qabsoomida doorashooyinka iyo wakhtiga loo cayimaba.
Xukuumada hadda talada haysa marna may dalban in muddo loo kordhiyo, balse muddooyinka doorashada lagu daray , waxa keenay duruufo ay ka mid yihiin diiwaan gelintii laga sameeyay dalka , taasi oo ay ku heshiiyeen saddexda xisbi qaran. Mudada saddexda Billood ee ay soo jeediyeen Komishanka Doorashooyinka in dib loo riixo wakhtigii doorashada waxa iyana keenay arrimo farsamo.
Waxa haddaba aanu kula talinaynaa nin kasta oo damac ka hayo Madaxtinimada dalka waa in uu u hogaansamaa una maraa dariiqa shuruucdu ay jidaysay ee lagu tagayo kursiga, Madaxweyne-na laguma noqdo cay, aflagaado iyo dalka oo khal khal la galiyo.
Ugu danbayntiina, waxa aanu leenahay Hogaamiyayaasha Asxaabta Mucaaridka in ay ummada u tudhaan , kana daayaan hanjabaada iyo amaan darida ay ummada ugu baaqayaan.